ကိုယ်က အသာစီးရနေပြီလို.ထင်ပြီး နွားကျောင်းသားစကားပြောနေသည့် ပညာမဲ့လူတန်းစားအုပ်ချုပ်သောခေတ်ကြီး၊ | Ethnic Nationalities' Voice: Struggling Voices for Justice
ကိုယ်က အသာစီးရနေပြီလို.ထင်ပြီး နွားကျောင်းသားစကားပြောနေသည့်
လူထုအသည်းနှလုံးကနေ (၉၄)ရာခိုင်နှုန်း ဆန်.ကျင်ထားသော အခြေခံဥပဒေအောက်မှာ အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေးလုပ်ထားသော အဖွဲ.အစည်းတွေရော၊မလုပ်သည့်အဖွဲ.အစည်းတွေကပါ အားလုံးလိုက်နာရမည် တဲ့၊ ဒီစကားဟာ တော်တော်ပိန်းတဲ့နွားကျောင်းသား စကားပဲ၊
ခွေးတစ်ကောင်က ဘာပြောလဲဆိုတော့၊ ” ခင်ဗျာတို.စော်စော်စီစီ လက်နက်ချခဲ့တာ ကံကောင်းတယ် လို.၊ နို.မဟုတ်ရင်၊ ကျနော်တို.ဆွေးနွေးရမည့်စာရင်းထဲမှာပါသွားမည်တဲ့ “
ရှမ်းတပ်မတော်ရဲ.တုံ.ပြန်ချက်ကတော့၊ ” ငါတို.နဲ.တိုက်ဖို.ခွေးမသာတွေ အဆင့်သင့်ဖြစ်ရဲ.လား? လို.မေးခွန်းထုတ်မေးလိုက်သည်။
တိုင်းရင်းသားအသံပြောချင်တာက၊ တပ်ပေါင်းစုကို ခိုင်င်မာမာလုပ်ထားပါ၊ ငြိမ်းချမ်းရေး မဖျက်သိမ်းခင် ပြည်တွင်းမှာ ရှိသည့် ဗမာစစ်ခေါင်းဆောင်တို.၏ မိသားစုဝင်မျာ၏းစာရင်းများ၊အလုပ်အကိုင်၊လှုပ်ရှာသွားရာနေရာတွေကို စုဆောင်းထားကြပါ၊ လက်နက်လည်မချကြပါနဲ.၊နိုင်ငံရေးပါတီလည်မထောင်ကြပါနဲ.၊ အခြေခံဥပဒေလည် အသိအမှတ်မပြုကြပါနဲ.၊ရွေးကောက်ပွဲလည်မဝင်ကြပါနဲ.၊တောထဲမှာလည် တိုက်ပွဲမဆင်နွဲကြပါနဲ.၊ ခွေးတွေထိုင်နေသည့် လူရွာမှာ ငရဲပြည်နေပြည်တော်ကို အဆိပ်ခတ်လိုက်ပါ၊ ဘာမှမညှာတာပါနဲ.၊အားလုံးရှင်းပစ်လိုက်၊ ဒီကောင်းတွေက လူသားတွေရယ်လို. မသတ်မှတ်ကြပါနဲ.၊ မြို.ပေါ်တွေမှာဘဲ တိုက်ပွဲဆင်နွဲကြပါ၊တောထဲမှာတိုင်းရင်းသားရွာတွေကို သူတို.မီးရှို.သလိုမြို.ပေါ်တွေမှာ လည် သွားပြီးမီးရှို.ကြပါ၊ တိုင်းပြည်ပျက်စီးမှာကို မစိုးရိမ်ကြပါနဲ.၊ လူမျိုးပျောက်မှာကို စိုးရိမ်းကြပါ၊ ဦးနှောက်ရှိကြပါ၊ လုံးဝမညှာနဲ.၊ ဝင်ချကြ၊
Regional commanders: Ceasefire, non-ceasefire groups must abide by the new constitution
Regional commanders said all ceasefire and non-ceasefire groups must comply with the new constitution approved by Burma’s ruling junta in May, while meeting with people from United Wa State Army and Shan State Army, according to SHAN sources.
On5July, the new Commander of Eastern Region Command and Chairman of Shan State South Peace and Development Council, Maj-Gen Ya Pyae who succeeded Maj-Gen Thaung Aye, called on Merng Zeun, former Shan State Army 758th Brigade commander who surrendered on 17 July 2006, at Namzarng and told that all ceasefire groups and the rebel groups must change their policies in accordance with the new constitution while expressing his thank.
“All armed groups must remain under the command of the Tatmadaw (Armed Forces) according to the new constitution which most people supported on the May 10 referendum and all must adjust themselves during the2years before the 2010 election,” said the commander.
“You are so lucky that you surrendered your arms to us earlier, if not you too will be in the list of the discussion.”
Likewise, last June, Maj-Gen Min Aung Hlaing, the outgoing Commander of Kengtung-based Triangle Region Command and the new Maj-Gen Kyaw Phyo also called the meeting with 20 representatives from the United Wa State Army (UWSA) at its command post before he transferred his position to the new commander.
“In the next two years, there will be an election. You all must tell your top officials that you must prepare to abide by the new constitution,” Maj-Gen Min Aung Hlaing said during the meeting.
“It is as good as saying we must surrender or retire. Does it mean they’re ready to fight us if we refuse to?” commented the source form the SSA.
On the other hand, the Burma Army has reportedly reinforced armored vehicles and troops at Loi Lang, opposite Mae Ai district, Chiangmai’s province. Unconfirmed report also says it will set up an FM 88 radio station in the area that will have many ethnic languages like Shan, Akha, Lahu and others, according to Shan State Army source based in Loi Kaw Wan, opposite Chiangrai.